Maitiro ekuisa Google "Pakutarisa" widget yeApple ▷ ➡️ Android Pop ▷ ➡️
Maitiro ekuisa Google's "Mukutarisa" widget yeApple
Maitiro ekuisa Google's "Mukutarisa" widget yeApple Unogona here kuva neyako Widgets nekatarisiro ke Google pane chero Android Smartphone? Kusimbisa.
Maitiro ekuisa iyo widget "Pakutarisa" kweGoogle yeiyo Android Chii ichocho?
Chekutanga pane zvese, chii chinonzi Google "Pakufunga" Widget? Is a simba widget iyo inopa mushandisi nhevedzano yeruzivo rwakakosha senge nguva, zuva, mamiriro ekunze, tembiricha, nguva dzakatarwa pakarenda uye zvimwe zvinhu zvinoshanda izvo imba yeMountain View inoshandisa zvishoma nezvishoma.
Nekudaro, kuva ne At A Glance Widget kubva kuGoogle pane chero Android Smartphone Kune zvekare dzimwe nzira, semuenzaniso, kuisa iyo app yatataura, Imwe Widget, kunakidzwa neimwe yakafanana uye inoshanda vhezheni.
Maitiro ekudhawunirodha Google "PaKufunga" Widget
Izvo zvaunoda kuti uve ne At A Glance widget pane chero Android Smartphone ndeyekubata imwe isinganyanyo shandiswa (isingasviki hafu yezana ramakore), iine gumi MB yemahara memory uye Android 6.0 Marshmallow kana nyowani shanduro mubhodhi.
Saka zvakanakisa zvido zve tora uye isa Imwe Widget, iko kunyorera kunotifarira kwenyaya iyi, kunoteverwa nekuvandudzwa. Inowanikwa mu Google Play Store uye kunze kwekuitsvaga kubva ipapo, unogona kuikanda mahara kubva pabheji riri pazasi.
Iyo inoshanda sei uye maitiro ekugadzirisa iyo Google "Pakubwinya" Widget
Paunenge uine kurodha pasi uye kuisa widget "Pakutarisa" mune chero Android Smartphone.
Kutanga, iwe unofanirwa kupa Widget mvumo "Mukutarisa" kuratidza windows-pop-up windows apo iko kushandiswa kuri kumashure.
Iyi ndiyo mvumo inodiwa Imwe Widget inoshanda uye inoratidzwa pachiratidziri chikuru chefoni, sezvatinoudzwa ipapo, kana tichivhura application. Dzimwe mvumo, kuwana chinzvimbo, karenda, nezvimwe, zviri panzvimbo yemushandisi, zvinodikanwa zvichienderana nesarudzo dzatinokumbira kubva kuwijeti.
Nekudaro, iwe paunotanga kuvhura iyo app, iwe unoratidzwa ne nyore kuverenga interface, ine At A Glance Widget yekutarisa kumusoro uye nhevedzano yesarudzo pazasi, yakakamurwa muzvikamu zvakati. Ratidza, Zviitiko, Mamiriro ekunze, Clock uye nezvimwe. Naizvozvo, zviri nyore kunzwisisa kuti zvese zvaunofanirwa kuita ndezve gadzirisa akasiyana parameter pano zviripo, izvo "Mukutarisa" kubva kuGoogle zvinotiratidza mune yakakura nzira yekugadzirisa.
Mashandisiro ekushandisa Google "At a Glance" widget
Sezvauri kuona, muchikamu Display podemos chinja saizi uye mavara yechinyorwa chemitsara yekutanga neyechipiri, nhanha mimvuri, chinja iyo fomati yemisi, ratidza kana kuvanza akaparadzanisa mavara, sarudza font and the kumashure kweruvara. Pane menyu Zviitiko, zvinodikanwa kupa iyo hama mvumo, zvinogoneka sefa izvo zvekuona, tarisa yasara nguva, mamiriro ekunze, sarudza iyo yakasarudzika kalendari application uye nezvimwe.
In the Climate, Widget yeGoogle "Pakutarisa" inotibvumidza kusarudza kana kuratidza iyo kana kwete mamiriro ekunze. Zvisinei, zvinosungirwa kupa mvumo yeku geolocation uye gadzirisa mupi wemamiriro ekunze.
Kuti uite izvi, unofanirwa kunyoresa mahara account pa openweathermap.com, teedzera kiyi yeAPI mukugadzirisa uye unamate mumunda unoenderana, mu "Weather API Key" yeimwe widget. Nenzira, zvinogona kutora maminetsi mashoma kusvikira kiyi yazivikanwa uye iyo widget inoratidza mamiriro ekunze.
Kupedzisira, muchikamu Tarisa podemos seta iyo ruvara, saizi uye margins yenguva inoratidzwa muwijeti "Mukutarisa". Nepo Glance ichitibvumidza isu kugadzirisa mamwe ruzivo senge nnhau, nziyo izvo zviri kutamba, zvinotevera maalarm uye wedzera zvinyorwa.
Kana aya ma parameter akaiswa uye akaiswa pachiratidziri chikuru, unogona kunakirwa neGoogle "Pakubwinya", inoridzwa neimwe widget. Mukana uri nyore uye uri nyore ku gadzirisa yako SmartphoneKunyangwe isiri bug-isina, iri kugara ichigadziriswa neyemugadziri wekugadzirisa, optimizations, uye mamwe maficha.
Maitiro ekugadzirisa matambudziko esvomhu neGoogle Lens nefoni yako yeApple
Maitiro ekugovana Google Mifananidzo albha pane Android